Wararka Maanta: Arbaco, May 9 , 2012-Meydka marxuum Cabdi Xayi oo si heer qaran ah loogu aasay Nairobi
Arbaco, May 10, 2012(HOL):-Waxaa si heer qaran ah maanta loogu aasay magaalada Nairobi ee caasimadda Dalka Kenya Marxuum Cabdi Xayi Cusmaan Garaad oo shalay ku geeriyooday magaalada Nairobi.
Aaska Marxuumka ayaa waxaa ka qeybgalay Siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen Dr. Cali Khaliif Galeyr, Jen. Maslax Maxamed Siyaad Barre, Jen. Maxamed Siciid Xirsi Moorgan, Wasiirka Ganacsiga ee Kenya Moses Watangula, Xildhibaano ka tirsan Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo Dadweyne aad u faro badan.
Marxuumka oo da’diisu ay ahayd 40 sano jir ayaa wuxuu ku howlanaa wax u qabashada dalkiisa iyo dadkiisa, gaar ahaan in xal loo helo mushkiladda Soomaaliya, waxayna dadkii yaqiinay isku raaceen in Cabdi Xayi uu ahaa shakhsi aad u dhaqan iyo dabeecad wanaagsan oo dadka oo dhami ay jecel yihiin.
HALKA HOOSE KA DAAWO AASKA MARXUUMKA